प्रेरणाको श्रोत रुपा र कृष्णको सानो खुसी परिवार यस्तो देखियो ! (हेर्नुहोस तस्विर्) – Khabaarpati
October 11, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on प्रेरणाको श्रोत रुपा र कृष्णको सानो खुसी परिवार यस्तो देखियो ! (हेर्नुहोस तस्विर्)
काठमाडौं : रुपा र कृष्ण वलीको जोडी सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल जोडी हो । उनीहरुको जिवनको संघर्ष मानिसको जिवनका लागि प्रेरणा दिने खालको छ । रुपा र कृष्ण कलियुगका लागि राधा र कृष्णका जोडी हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
हाल यो जोडीको लागि निकै ठुलो खुशी प्राप्त भएको छ । यी २ को सन्तान प्राप्ति भएको छ । पहिलो सन्तान स्वरूप जोडीको छोराले जन्म लिएको छ । छोराको जन्म भएको २ हप्ता पुग्नै लाग्यो । यो बिचमा दुबैले आफ्नो सन्तानको तस्वीरलाई सामाजिक सन्जालमा शेयर गरिरहेका छन् ।
यो खुशीमा उनीहरुलाई सुभाचिन्ताकहरुले सामाजिक संजालमा सुभकमना ब्यक्त गर्नेक्रम अझै पनि चलिरहेको छ । निकै अप्ठेरो अवस्थामा रुपाले कृष्णलाई साथ दिएकी छन् । उनको मायाका कारणले नै कृष्णले आफ्नो जिवनको सबैभन्दा दुखद् अवस्थावाट पार भएका छन् । उनीहरु अहिले आफ्नो जिवनलाई निकै उल्लासपूर्ण तरिकाले बिताएका छन् । दुर्घटनामा हात र खुट्टा गुमाएका कृष्णलाई रुपाको माया र साथ नै जिउने आधार बन्यो ।
एक अर्कालाई निकै माया गर्ने यो जोडीलाई यति ठूलो दुर्घटनाले पनि छुटाउन सकेन । हात खुट्टा गुमाएका कृष्णलाई रुपाले माया, साथ र हौसला दुवै दिइन् । सामाजिक सञ्जालमा चलेको अभियानका कारण उनीहरुले आर्थिक सहयोग पाए । देश र विदेशवाट आशिर्वाद र माया पाए । अहिले कृष्णले कृतिम खुट्टा लगाएका छन् ।